UKUBUYEKEZWA KOMKHIQIZO - UKULUNGISWA KWESTELLAR FOR ACCESS - KUXHASWE
Izinhlekelele ze-IT azenzeki ngenxa yomlilo, izikhukhula nanoma yimuphi omunye umcimbi oyinhlekelele. Kwesinye isikhathi, iphutha elilula noma iphutha lokwahlulela njengokulungiswa okuyiphutha noma ukwenza isipele noma ukusetshenziswa kohlelo lokusebenza ngokungaqondile kungabeka umphathi we-Access enkingeni enkulu. Bengihlale nginovalo ngokusebenzisa imibuzo eyinkimbinkimbi noma ehlanganisiwe ku-database yami yokuFinyelela futhi kunesizathu esinamandla sokuthi kungani ngigweme ukwenza lokho. Noma kunini lapho sisebenzisa imibuzo eyinkimbinkimbi ku-Access database, kuhlale kunenkinga!
Empeleni, indima yemibuzo eyinkimbinkimbi noma ehlanganisiwe ukulanda idatha kweminye imibuzo engahle ihlasele abanye. Ngokwenza lokho, i-Access database iqala ukubhala imibuzo engenasidingo, okuholele ekuqoqeni idatha yesikhashana. Empeleni, umsebenzisi wedatha yokuFinyelela akayazi inqwaba yedatha enjalo.
Imvamisa, noma ngemuva kokusebenza kunani elincane ledatha lo mbuzo uwenza kancane ngenxa yemvelo yawo eyinkimbinkimbi, futhi lokhu kubeka ingcindezi kunjini yeJET. Kulokhu, ukwehla kwenqubo yokulanda idatha ngemibuzo yi- idatha enqwabelene yesikhashana .
Ngaphezu kwalokho, phakathi nale nqubo, uma i-Access ingaminyanisa, ayikho indlela yokugwema inkohlakalo efayeleni elingemuva.
Ukugwema inkohlakalo yokuFinyelela, okubangelwe ukuqoqwa kwedatha , bonke abasebenzisi be-Access abanendima yezokuphatha babethunyelwe nge-imeyili ukulandela izindlela ezimbalwa zokuzivikela ezinjenge:
Gwema ukusebenzisa imibuzo eyinkimbinkimbi ku-database, okungavimbela ukusebenza kwedatha ngenxa yokuqongelelwa kwedatha futhi ekugcineni kuholele ekonakaleni kwedatha.
Hlukanisa i-database lapho imininingwane engemuva inamaThebula angafinyelelwanga abasebenzisi ngqo, futhi idatha engaphambili iqukethe imibuzo neminye imisebenzi yokuFinyelela.
Gcina ikhophi eyisipele kuyo yonke i-database.
Qhubeka nokubhala ingxenye yedatha yesikhashana kumatafula wesikhashana. Lokhu kusheshisa umbuzo ikakhulukazi ngesici esingu-10 noma kwesinye isikhathi ngaphezulu, kepha-ke, iyehluleka ukunikeza isisombululo saphakade.
Faka Umbuzo Wamandla isici se-Access database lapho abasebenzisi benze ukuxhumana okunamandla ne-Excel workbook futhi lokhu kuxhumana kuvuselelwa ngokuqhubekayo ukuthola izibuyekezo ezivela ku-database.
Hlela Ukusetshenziswa Kwe-Compact and Repair ngokushesha lapho i-database ivaliwe. I-'compact close' ezenzakalelayo yenzelwa ukunciphisa izikhala ezingasasebenzi njalo kusuka ku-database.
Qaphela: Abasebenzisi abanendima yokuphatha banikezwa imisebenzi ethi 'funda-bhala-susa' ku-database Yokufinyelela. Indima yokuphatha inganikezwa kubasebenzisi abaningi, isibonelo, izinhloko zeminyango ehlukene.
Kepha, lapho omunye wabasebenzisi bezokuphatha ekhohliwe ukulandela le mithetho ebalulwe ngenhla engu-5, i-database yenhlangano yethu ye-Access yonakala
Ukuhlaziywa Kwempande (RCA) yenkohlakalo ku-Access Database issue
Okwethu akuyona inhlangano enkulu, yingakho i-Access database inkulu ngokwanele ukugcina idatha. Lezi database ze-Access zihlukaniswe ngesisekelo seminyango ehlukene ngokwesibonelo 'i-Database yezezimali' yehlukile kwi-'Database for Marketing 'futhi yonke imininingwane yenziwe itholakale kuseva ejwayelekile ebonakalayo.
Kodwa-ke, omunye wabasebenzisi onamalungelo okuphatha ukhohliwe ngaleyo imeyili futhi waqala ukubhala imibuzo eyinkimbinkimbi. Le mibuzo eyinkimbinkimbi iqale ukudala amafayela wesikhashana angadingekile emuva futhi ngolunye usuku imininingwane eyayiqoqiwe isikhathi esithile yaholela enkohlakalweni egciniwe yokuFinyelela. Yonke imisebenzi, kufaka phakathi ukufinyeleleka kwedatha, okuhlobene naleyo database kufinyelele esiphethweni esingalindelekile.
Ngisho nangemva kokuqondanisa i-database yokuFinyelela nokuthatha zonke izindlela zokuvimbela, iphutha elincane elenziwa ngokungazi ngumsebenzisi ophethe, liholele enkingeni enkulu.
Manje njengoba inkohlakalo yenzekile, umsebenzi wethu wokuqala kwakuwukuxazulula iphutha lenkohlakalo futhi senze i-database iphile futhi.
Izindlela zokuxazulula ezamukelwe ukulungisa i-Access database
I-RCA isisizile ekuboneni imbangela yenkinga nendlela yokuxazulula.
Buyisela ngokulondoloza: Sibe nesipele esilungile sedatha yonke etholakalayo yokubuyiselwa kwedatha. Izinyathelo ezilandelayo zenziwe ukubuyisela isipele:
Ivula i-File Explorer futhi yaphequlula ukuze ikhethe ikhophi ledatha enempilo
Kukopishwe i-database endaweni lapho i-database eyonakele idinga ukushintshwa khona. Kwakunenketho yokushintsha i-database ekhona futhi sakhetha leyo nketho.
Kuvulwe i-database ukuqinisekisa ukuthi i-database ibifinyeleleka yini.
Okusidanisayo ukuthi ikhophi eyisipele ibibukeka ingaphilile. Futhi, sabona ukuthi i-database ye-Access etholakala ku-Excel ibingakavuselelwa isikhathi eside.
Yaqala lapho inkinga yangempela.
Idathabheyisi yethu yokuFinyelela ibingatholakali, ibhekhaphu ibingaphilile, ibhuku lokusebenzela le-Excel elinombuzo wePower belingavuselelwa, futhi njengoba besivele sisebenzisa i-Compact and Repair utility, belingekho ithuba lokutholakala kwe-Access database kusuka kuzinsiza ezakhiwe ngaphakathi.
Isixazululo sokugcina sokulungiswa kwedatha
Isizindalwazi esingafinyeleleki besidala umonakalo phakathi kwabasebenzisi. Abasebenzisi abaningi basale dengwane futhi abakwazanga ukwenza umsebenzi ojwayelekile. Bekufanele ngempela sisebenze ngokushesha futhi sixazulule lolu daba ngokushesha. Manje indlela engcono yokuxazulula kwaba ukulungisa i-database eyonakele nge-software yomuntu wesithathu engabuyisa yonke i-database ngaphandle kokunweba isikhathi sokuphumula.
Siseshe okusebenza kahle Finyelela isoftware yokuthola i-database nakwezinye izinketho ezimbalwa ezitholakalayo, uthathe isinqumo sokukhetha Ukulungiswa kweStellar for Access . Sifunde izibuyekezo ezithunyelwe kumasayithi ahlukene futhi sacabanga ukuzama inguqulo yedemo.
Qaphela: Njengesinyathelo sokuqapha, besithathe ikhophi eyisipele yedathabheyisi.
Kwavela isoftware ye-DIY. Lapho sesithumele ifayili lokuFinyelela elonakele, isoftware inikeze ukubuka kuqala kwayo yonke i-database yesheke lokugcina. Futhi, ithimba lokuxhasa i-Stellar belingaphezu nje kokusiza ekuxazululeni imibuzo yethu.
Kwakuyisikhathi senjabulo enkulu. Senze isoftware yasebenza, yalungiswa futhi yagcina yonke i-database yokufinyelela kungakapheli sikhathi. Udaba lwenkohlakalo luxazululwe ngokuphelele futhi futhi bonke abasebenzisi bakwazi ukufinyelela ku-database.
Kunezimo ezahlukahlukene lapho i-Access database ingafinyeleleka khona, futhi inkinga enkulu ngale database ukuthi ithambekele enkohlakalweni.
windows 10 izithombe ezigqamile 2019
Ngenxa yalesi sizathu ngihlala nginakekela ukuthi angakhi imibuzo eyinkimbinkimbi. Imibuzo enjalo yaziwa ngokuholela ezindabeni ezinkulu njengokudala amafayela wesikhashana angenasidingo ngemuva, kunciphise inqubo yokulanda idatha, ekugcineni kuholele enkohlakalweni egciniwe yokuFinyelela. Uma lokhu kwenzeka, kudinga ukunakekelwa ngokushesha.
Muva nje, ngithole enye yezinto ezinkulu ezitholakele njengoba kuqhutshwa www.quest.com . Kwachazwa ngokusobala ukuthi ukwehluleka kwehardware kuyimbangela enkulu yomthelela webhizinisi, kufinyelela ezingeni lama-75% (hlola ithebula elingezansi ukuthola inkomba). Ukwehluleka okunjalo kwehardware noma kwe-software kunomthelela oqondile webhizinisi futhi ngenxa yalesi sizathu, kufanele kuhanjelwe ngokubekwa eqhulwini.
Yize isipele semininingwane sinikela ngesixazululo esisheshayo kepha izinto ziya ku-haywire lapho ukwenza isipele kungaphilile. Isoftware yomuntu wesithathu efana neStellar Repair for Access iyona ndlela engcono kakhulu uma kukhulunywa ngokulungisa i-database yokuFinyelela ekhohlakele.
Esimweni sethu, lapho i-database yokuFinyelela yonakala ngenxa yemibuzo eyinkimbinkimbi isoftware inikeze imiphumela esheshayo. Inzuzo enkulu yesoftware ukuthi ingahlolwa ukusebenza kwayo ngaphandle kokusebenza. Futhi singagcina idatha yethu ngokushesha ngemuva kokusebenza. Besingekho isikhathi esisele futhi besingakwazi ukuxazulula amaphutha enkohlakalo ngokubuyisela izinto ezigciniwe kwisizinda semininingwane esisha ngokuphelele.
Abasebenzisi bangafinyelela kwi-database Yokufinyelela futhi sakhululeka!
Windows 10 imenyu yokuqala ayivuli ngemuva kokuvuselelwa kukaMeyi 2019? lapha ungayilungisa kanjani
Lungisa isifaki se-NVIDIA Sehlulekile Windows 10 inguqulo 1903
ithuluzi lokuhlola imemori windows 10
ukusetha i-ftp server windows 10
ilayisense lakho lewindows lizophelelwa yisikhathi kungekudala kmspico
windows 10 ukuthuthukisa ukufaka kunamathele kuma-99
ngikhipha kanjani iphrinta yami esimweni esinamaphutha